“Waqtigii Aan Kusoo Qaatay Real Madrid Ayaa Ahaa Midkii Ugu Xanuunka Badnaa Xirfaddeyda” - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
“Waqtigii Aan Kusoo Qaatay Real Madrid Ayaa Ahaa Midkii Ugu Xanuunka Badnaa Xirfaddeyda”
Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid Manuel Pellegrini ayaa wuxuu sheegay inay u aheyd waqtigii ugu xanuunka badnaa xirfaddiisa tababarenimo maalmihii uu ku qaatay taliska kooxda ka dhisan Estadio Santiago Bernabeu – wuxuuna Los Blancos ku tilmaamay koox ay adag tahay in la maamulo.
63 sanno jirkaan ayaa wuxuu haatan maamulaa kooxda Hebei China Fortune ee dalka Shiinaha, waxaana laga raacdeeyey Los Blancos markii uu guuldarrooyin isxigay kala kulmay kooxaha Alcorcon iyo Lyon.
Laakiin Manuel Pellegrini waxaa u yaalla rikoor ay adag tahay in la gaaro, maadaama uu ahaa tababarihii keensaday dhibcaha ugu badan ee horyaalka La Liga iyadoo ciyaaro badan laga adkaaday kooxdiisii Real Madrid.
“Waqtigeygii aan kusoo qaatay xilka tababarenimo ee kooxda Real Madrid ayaa ahaa midkii iigu xanuunka badnaa xirfaddeyda tababarenimo,” ayuu u sheegay shabakadda Tactical Football.
“Sababtoo ah Real Madrid waqtigaas ma aheyn koox dhammeystiran, sidoo kale waxaa miiska ii saarnaa dhibaatooyin cad oo ay tahay inaan xal u helo.
“Waxaan ka tegay Real Madrid anigoo ka xun in aanan wax koob ah u qaadin inkastoo aan dhibco ahaan rikoor wanaagsan heystay.
“Waxaan lasoo saxiixanay xiddigo magac leh oo waa weyn, laakiin waxaan heysanay weeraryahanno badan, halka qadka dhexe xiddigaha ka ciyaara ay nagu yaraayeen, sidoo kale ciyaartooy aan doonayey inaan kooxda kusii hayo ayaa la iibiyey.”
Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso iyo Karim Benzema ayaa ugu magac weynaa xiddigihii uu tababarahaani usoo iibiyey Real Madrid.